इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा पुर्‍याइएको अवरोधप्रति क्यानको निन्दा ! -
कोरखबर १७ असोज, २०७८
असोज १७, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याउने गतिविधि गरेको भन्दै कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) खेद प्रकट गरेको छ ।
आजदेखि प्रेस पास र अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरण अनलाइनबाटै, यस्तो छ तरिका
नेदरल्यान्डमा टिकटकलाई साढे ७ लाख युरो जरिवाना
मेरो सेयरमा थपिएको ‘माइ होल्डिङ’ फिचर कसरी प्रयोग गर्ने ?
मंगल ग्रहमा पहिलो पटक हेलिकप्टरको सफल उडान (भिडियोसहित)
Moto G10 Power शक्तिशाली व्याट्रीसँगै लन्चिङ्ग
दोलखामा टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार !
चलनचल्तीका टप स्मार्टफोनहरु